नेकपा असन्तुष्ट पक्षको निस्कर्षः ९ महिनामा न पार्टी चल्यो न सरकार, मात्र चल्यो गुट ! - YesKathmandu.com
नेकपा असन्तुष्ट पक्षको निस्कर्षः ९ महिनामा न पार्टी चल्यो न सरकार, मात्र चल्यो गुट !
काठमाडौं । पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएका नेकपाका २१ केन्द्रीय सदस्यहरुले राजधानीमा छुट्टै भेला गरेका छन् । पार्टी महासचिव बिष्णु पौडेल मार्फत अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई र खुमलटारस्थित निवासमै पुगेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका नेताहरुले सोमवार छुट्टै भेला गरेका हुन् ।
ओली सरकारको ९ महिना र पार्टीको पछिल्लो गतिविधिका बिषयमा उनीहरुले छलफल गरेका थिए । ९ महिने ओली सरकार असफल भएको उनीहरुले निस्कर्ष निकालेका छन् । ९ महिनामा जनभावना विपरित कार्य भएको उनीहरुको ठहर छ ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले ९ महिनामा बालुवाटारबाट सरकार चलाएनन्, गुट मात्र चलाए’ भेलामा सहभागि एक केन्द्रीय सदस्यले भने ‘अहिलेको ९ महिना कम्यूनिष्ट पार्टीका लागि घातक सिद्ध भएको हाम्रो निस्कर्ष हो ।’ उनीहरुले तत्काल पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय समिति बोलाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । तर पार्टीको मुल नेतृत्वले भने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै नवोलाई सचिवालयमा धमाधम निर्णय गर्न थालेको छ ।
सचिवालयले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिलाई उपेक्षा गरेपछि २१ असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यहरुले अध्यक्ष ओली र दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । प्रदेश कमिटी स्थायी कमिटीबाट पारित गराउन माग गरेका थिए । तर स्थायी कमिटीको बैठक नै नबोलाई नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । असन्तुष्ट पक्षले भेला गरिरहेका बेला सचिवालयले नामावली सार्वजनिक गरेको हो ।
पछिल्लो समय प्रदेश कमिटीको गठनमा पनि उनीहरुले असहमति जनाएका छन् । प्रदेश कमिटी गठनमा नेताका आसेपासेहरुलाई स्थान दिएको र जिम्मेवार नेता कार्यकर्तालाई स्थान नदिएको उनीहरुले बताएका छन् । विजुलीबजारमा भएको भेलामा स्थायी कमिटीका सदस्य युवराज ज्ञवाली र घनश्याम भूसाल सहभागि थिए ।
‘पार्टी केन्द्रीय तह, त्यो पनि सचिवालयमा मात्र सिमित भयो, स्थायी कमिटीदेखि गाउँ कमिटीसम्म प्यारालाइसिस भए’ स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने ‘न पार्टी चल्यो न सरकार, चल्यो मात्र गुट ।’